Tirada dadka uu soo ridanayo cudurka Daacuunka oo Soomaaliya ku sii kordheysa – Balcad.com Teyteyleey
Tirada dadka uu soo ridanayo cudurka Daacuunka oo Soomaaliya ku sii kordheysa
Dalka Soomaaliya waxaa sii kordhaya dadka uu soo ridanayo cudurka Daacuun caloolaha tan iyo markii uu bilowday sanadka 2017-ka, iyadoo gobolada Koonfurta, Bartamaha iyo Waqooyiga Soomaaliya laga deyrinayo xaaladooda nololeed kumanaan caruur iyo haween ah.
Hay’adda OCHA ayaa soo saartay tirada dadka u geeriyooday cudurka Daacuun caloolaha tan iyo bilowgii sanadkaan aynu ku jirno ee 2017-ka waxayna gaarayaan 782-Ruux, halka guud ahaan tirada dadka uu ku dhacay cudurka Daacuunka ay gaareyso 51,036-ruux oo isugu jira caruur, haween iyo dad da’ ah.
Cudurka Daacuunka gobolada uu ka dillaacay sida Bay iyo Bakool, Sh/hoose iyo Sh/dhexe ayaa ugu daran iyadoo aanay jirin kahortag ama daweyn ku filan sida ay sheegtay Hay’adda OCHA dadkaasi waxay u baahan yihiin gurmad caafimaad oo degdeg ah.
Sababaha keena cudurka Daacuunka ayaa lagu sheegay inay tahay abaaraha mudada fog ka jiray dalka Soomaaliya kaddib markii ay gabaabsi noqdeen roobabkii ka da’ayay, waxaana laga digayaa in malaayiin ruux ay noloshoodu khatar ugu jirto cudurka Daacuun caloolaha.
The post Tirada dadka uu soo ridanayo cudurka Daacuunka oo Soomaaliya ku sii kordheysa appeared first on Ilwareed Online.
Puntland oo ka hor-timid xeer ay dhowaan ansixisay DF Soomaaliya